Dagaalka ayaa Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya Al-Shabaab waxaa uu ku dhex-maray degaanka Sabiid ee gobolka Shabeellaah Hoose, waxaana ka dhashay qasaaro kala duwan.
Dagaalka ayaa yimid, kadib markii sida la sheegay Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig Ciidamada Dowladda ku leeyihiin degaanka Sabiid, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socay muddo dhowr saacadood ah.
Dadka degaanka Sabiid ayaa Warbaahinta waxaa ay u sheegene inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen Ciidamada Dowladda & Al-Shabaab, balse aysan cadeyn Karin khasaaraah ka dhashay maadaama dadka Shacabka ah aysan tegi Karin goobaha lagu dagaalamay.
Al-Shabaab ayaa dhankooda warar ay ku daabaceen Baraha ay ku leeyihiin Internet-ka waxaa ay ku sheegeen in weerarka ay ka geysteen degaanka Sabiid ay ku dileen laba Askari oo ka tirsan Ciidamada dowladda, in kastoo aysan jirin warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada Al-Shabaab.
Dagaalka ka dhacay degaanka Sabiid oo hoostaga degmada Afgooye ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli dowladda Soomaaliya ay sheegtay in howlgal ka dhacay Gobolka Shabeellaha Hoose lagu qabtay Saraakiil & Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Previous articleAfhayeenkii Hore Ee Aqalka Sare Itoobiya Oo Is Dhiibtay Iyo Sababta Keentay
Next articleDhageyso Bulshada Magaalada Baydhabo Oo Ka Aragti dhiibtay Shaacinta Isku aadka Tartanka Cayaaraha Maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir.